Guddi ONLF ah oo u Ambabaxay Maanta Gabalada Dalka Somalida Ogadeeniya – Rasaasa News
Guddi ONLF ah oo u Ambabaxay Maanta Gabalada Dalka Somalida Ogadeeniya
Jul 23, 2010 Guddi ONLF ah oo u Ambabaxay Maanta Gabalada Dalka Somalida Ogadeeniya
Wafti balaandhan oo ka kooban ururka ONLF, ayaa maanta waxaa ay socdaalkoodii ugu horeeyey ugu amabaxeen gabalada dalka, si ay u amaba qaadaan hawlgalka wadahadalda nabada ee uu ururku la galay dawlada wadaaga ah ee Itobiya.
Waftiga ayaa waxaa hor kacayey Afhayeenka ururka ONLF, mudane Maxamed Faarax Colow [dhag-jar]. Waftiga ayaa waxay isugu jiraan xubno ka tagay dibadaha iyo kuwo hore ugu sugnaa gudaha dalka oo ku yimid amarka madaxda sare ee ONLF.
Waftiga ayaa waxay ugu horaynba gaadheen magaalo madaxda gabalka Qoraxeey oo si aad ah loogu soo dhaweeyey. Magaalada ayaa waxay maalmahanba ku jirtay diyaar garow xoog leh oo lagu soo dhawaynayo waftiga ururka ONLF. Waxaana magaalada hore ugu sii sugnaa ciidan gaadhay 90 xubnood oo ka tirsan Cwxo, oo iyagu dhawaan yimid tuulada Galadiid, ka dibna loo soo gudbiyey magalaada Qabridahare.
Magaalada Qabridahare ayaa ah, meeshii ugu dambaysay ee ay ururuka ONLF iyo dawlada dhexe ee Itobiya isku soo hor fadhiistaan sanadkii 1994, kulankaas oo nasiib daro aan la isku af garanin.
Magaalada Qabridahare ayaa waxaa lagu wadaa in ay marti galiso wadahadalka nabada ee u dhaxeeya ururka ONLF iyo dawlada wadaaga ah ee Itobiya qaybtiisa sadexaad, oo noqondoonta qaybta ugu muhiimsan.
Waftiga ayaa waxaa la filayaa in ay cagta mariyaan dhamaan gabalda dalka, siiba gabalda ay colaadu sida xun u saamaysay, oo ay ka mid yihiin Gabalka Jarar, Qoraxeey, Doolo, Shabeele, Nogob, Afdher iyo gabalka Banka Jijiga oo ah meesha ay waftigu saaka ka amba baxeen.
Waftiga ayaa inta ay marayaan gabalada waxay la hadli doonaan dadweynaha gabalada degan iyaga oo ka dhagaysan doona warbixino, kana qaadan doona talooyinkooda. Sidoo kale waxay u kuur galidoonaan guud ahaan nolosha dadweynaha iyo waliba sida ay uga hirgashay nabadu tan iyo intii xabad joojinta lagu heshiiyey bishii June 2010.
Waftigu gabal walba oo ay tagaan waxay ku dhaafidoonaan masuuliyiin ONLF ah, kuwaas oo soo dhawayndoona xubnaha ka iman doona duurka ee Cwxo iyo wufuuda ka soo gudbaysa xuduuda dalalka dariska ah.